Ubuchwepheshe bethu - GW Laser Technology LLC
Faster, Okungcono, Kuhlakaniphe
Ungalokothi Umise Ukuqamba
Imikhiqizo ye-laser ye-GW Fiber esekelwe kubuchwepheshe bepompo obungu-976nm, i-laser beam ephuma ngokugqamile, ukusebenza kahle kokuguqulwa kukagesi-optical ≥42%, i-fiber laser yemodi eyodwa inekhwalithi nokuthembeka okungenakuqhathaniswa okunamandla amakhulu okukhipha afika ku-4KW, i-multimode fibre laser maximum output power up kuya ku-50000W enokukhanya okuphezulu kwemodi ye-flat-top beam ithuthukisa kakhulu isivinini sokusika seshidi lensimbi. Nazi ngezansi ubuchwepheshe bethu bokuthuthukisa obuzimele be-GW Laser Tech:
Ubuchwepheshe be-ABR bungasika isikhathi eside futhi buhluke kakhulu ngezinto zensimbi ezikhanyayo ezifana ne-aluminium, ithusi, ithusi, isiliva, igolide, insimbi yesibuko njll. Ngaphezu kuka-6000 GW lasers kukhona.
ukusebenzela abasebenzisi bokugcina emhlabeni wonke, kuqinisekisa ngokugcwele ukuthembeka nokuthuthuka kobuchwepheshe be-GW ABR.
Izinga lokusika lithuthukiswa kakhulu ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-Super PulsePiercing, obungagcini nje ngokuqeda isikhathi sokuma ukubhoboza amashidi e-matel, kodwa futhi kuthuthukisa kakhulu ukusika ukubhoboza okukhulu kwe-matel, okubonisa ngokugcwele inzuzo yobuchwepheshe ye-GW laser ekongeni ugesi.
Umsebenzi we-SMAT unokuvikela okuningi komthombo we-Laser uma usebenza, kuhlanganiswe izinhlobo ezimbalwa zezinzwa, ukuzenzela okuningiukuhlolwa, i-lol ekulawuleni okude nokuhlaziya kusuka ku-GW serviceteam, isondlo-mahhala.
Isekelwe kubuchwepheshe bephampu ye-976nm eyodwa. Imodi ye-HBF ye-beam inikeza okukhishwayo okuthuthukisiwe kwe-beam, ithuthukisa isivinini sokusika kanye nekhwalithi yokusika, ikakhulukazi ishidi lensimbi eliwugqinsi, ithuthukisa ukusika noma ukushisela ukusebenza kahle kwesicelo.
I-FRM ye-laser beam ephumayo, inhlanganisela engenamthetho ye-highenergy beam kanye ne-Ring Mode, usayizi we-beam oshintshwayo, i-aslo izokwaneliswa njengokushisela okuphansi kwe-spatter, ukusika okuguquguqukayo nezinye izidingo zohlelo lokusebenza.